Mudaneyaal ka tirsan Baarlamanka Somalia oo sheegay in shaqadii si ku meel gaar ah uga fariisiyeen gudoomiye Shariif Xasan Sh. Aadan | MultiethnicSociety
← Suudaan oo Dalkeeda ka cayrisay Safiirkii Kenya u fadhiyey Khartuum
Q.1aad – Dib u milicsiga magaalada Muqdisho – Mogadishu: Images from the Past -– MultiethnicSociety I →
Mudaneyaal ka tirsan Baarlamanka Somalia oo sheegay in shaqadii si ku meel gaar ah uga fariisiyeen gudoomiye Shariif Xasan Sh. Aadan
Mudaneyaal ka tirsan Baarlamanka Somalia oo maanta kulan xasaasi ah ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ku dhawaaqay iney kalsoonidii kala laabteen gudoomiyaha baarlamanka Shariif Shiikh Aadan isla markaana wixii maanta ka dambeeya aysan xilkaas u aqoonsaneyn Shariif Xasan.
Xildhibaanadan oo tiradoodu fara badneyd ayaa waxaa war saxaafadeed ay soo saareen saxaafaada ka hor aqriyey xildhibaan Avv. Sheegow oo sheegay in sidoo kale ay shaqadii gudoominta fadhiyada baarlamanka si ku meel gaar ah uga fariisiyeen Shariif Xasan ka dib markii buu yiri uu is hortaag ku sameeyey dib u furmida fadhiyadii baarlamanka uuna diiday inuu qabto mowshino ay soo diyaariyeen qaar ka mid ah xildhibaanada, isagoo tilmaamay inuu ku xad gudbay xeer hoosaadka iyo axdiga KMG Somalia.
“Go’aankan waxaan u cuskanay qodobka 13aad ee xeer hoosaadka baarlamanka oo shaqada gudoomiyaha tilmaamaya iyo qaabka ay tahay in howsha looga fariisiyo haddii uu waajibaadkiisa gudan waayo, waxaana ka codsanaynaa gudoomiye ku xigeenka 2aad ee baarlamanka inuu noo gudoomiyo fadhi aan go’aan kama dambeys uga qaadaneyno Shariif Xasan oo dhici doona 3-12-2011-ka” ayuu intaa ku daray Avv sheegow.
Xildhibaan AVV Maxamed Nuur Sheegow oo ka mid ah xildhibaanada ayaa sheegay in Guddoomiyaha Baarlamaanka ay u tageen, kana codsadeen inuu furo fadhiyadii Baarlamaanka si looga doodo qorshaha Road Map-ka hase ahaatee uu ka biyo diiday ayuu yiri Sheegow, wuxuuna intaasi ku daray in Baarlamaanka hadda ka dib uusan u xirnaan doonin shaqsi iyo wax la mid ah sida uu yiri.
“Cid kasta oo isku dayda inay horistaagto arrimaha danta u ah maslaxadda Ummadda Soomaaliyeed talaabo ayaan ka qaadeynaa, xilka waan ka qaadi doonaa, mana jirto cid diidi karta in la furo fadhiyadii Baarlamaanka, waana laga doodayaa qorsha Road Map-ka” ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Nuur Sheegow.
Xildhibaan Nuur Islow oo ka mid ahaan jiray xubnaha sida weyn u taageersanaa gudoomiye Shariif Xasan oo isna kulankaas ka hadlay aya sheegay ineysan in baarlamanku uu yahay codka shacabka soomaaliyed, uusana u afduubnaan doonin shaqsi daneyste ah, wuxuuna shacabka soomaaliyed ka codsaday iney fekerkooda ku taageeraan.